Soomaalida Iswiidhan oo hadal haya barnaamij looga hadlayey Amisom | Somaliska
Soomaalida Iswiidhan oo hadal haya barnaamij looga hadlayey Amisom
Soomaalida Iswiidhan gaar ahaan kuwooda aad u adeegsadda baraha bulshada ayaa hadal haya barnaamij muuqaal ah oo telefeyshinka dalkaan Iswiidhan sii daayey toddobaadkii hore.
Barnaamijkaas uu soo iibsaday oo ka hadlayey waxqabad ku sheega ciidammadda Afrikaanta ah ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Muuqaal kala duwan oo banraamijkaasi luga soo qaaday oo baraha bulshadda la soo dhigay ayaa, waxaa ka muuqday aflagaado iyo fal farro xumeeyn ah oo ciidamadaasi u geeysanayaan gabdhaha yar yar.
Muuqaalo, ayaa waxaa ka muuqday sida ciidan ku sheegaasi ay u isku dayayaan ineey gacmo gacmeeyaan gabdho yar yar oo soomaaliyeed oo baahan kuwaas oo kaamiradu soo qabatay. Arrinta kale ee cajiibka ah ee muuqaaladaasi ka muuqday ayaa waxaa ka mid ah ineey yiraahdeen “Gabdhaha soomaaliyeed haddeey gaarto labaatan oo aan la guursan oo uu walaalkeed naageeysanyo cunugaasna uu hadhow naqonayo mid is qarxiya”
Si kastaaba ahaatee, soomaalida Iswiidhan oo arrintan aad baraha bulshadda uga fal celisay, ayaa hadda qaar ka mid ah oo aan xirriiro la sameeynay noo sheegeen ineey waaxda faaf-faah reebka dalkaan Iswiidhan ee warbaahinta u qaabil u gudbin doonaan cabasho la xirriiro muuqaladda iyo aflagaadada uu talefeyshinka si bareer ah u sii daayey, isagoo beey yiraahdeen maamulka telefeeyshinku og yahay in soomaalid Islaam tahay oo diintooda iyo dhaqankooda midna ogolaaneyn in wiil walaashiis la dhalatay farro xumeeyo.
Muuqalka telefeyshinka Iswiidhan sii daayey ayaa waxaa uu ahaa mid looga hadlayey ciidammadda dalka Burundi oo aad mooda in askartooda ay yihiin duli aan ixitraam u heyn dadka ay u yimaadeen ee nabad ilaalinta looga soo diray.
Shalay ayaa hogaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga waxaa ay iska fogeeyeen falka ciidankaasi sameeyeen iyagoo sheegay ineeysan ka tirjumeeyn ciidankooda. Ciidammadda lugu sheegay nabad ilaalinta ee muddo haatan 10 sanno kor u soo dhaafay ee iskood u yimid Soomaaliya ayaa falal aad u fool xun u geeystay bulshadda soomaaliyeed. Falalkaas oo ay ka mid yihiin kufsi, barakicin, dil iyo xasuuq aan loo aabo yeelin, iyagoo sidoo kale gawaaridda ay adeegsadaan dadka si ku talagal ah u marsiiya.
Noorweey oo ku baaqday in qaxootiga ka soo talaabaya Afrika celiyo inteeysan soo gaarin Yurub
Sida looga fogaado qayaamada internetka
Xulka kubadda cagta Iswiidhan oo u soo baxay cayaaraha adduunka